Ingiriiska oo derbi uu qaxootiga uga hortagayo ka dhisaya Faransiiska | Somaliska
Ingiriiska oo derbi uu qaxootiga uga hortagayo ka dhisaya Faransiiska
Bishan eeynu ku jirno ee sibteembar ayaa dowladda Ingiriiska waxaaay si tar tatiib tartiib ah u bilowday derbi ay dooneeyso ineey kaga qorto qaxootiga kaga imanaya dalkaasi Faransiiska.
Derbigan ayaa horudhac u ah qorshe loogaga hortagayo qaxootiga faraha badan ee dalkeeda ku soo qulqulaya, waxaana derbigan laga dhisayaa magaaladda dekedda ah ee Calais ee ku taala waqooyiga dalka Faransiiska. Warbixintan ayaa waxaa daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalkaasi Ingiriiska.
Silig lugu heereyn doono dekadda Calais ee waqooyiga Faransiiska. Sawirka: The Guardian.
Wasiirka socdaalka dalkaasi Robert Goodwil, oo hadalkaan sheegay ka hor intaanla gaarin komoshinka baarlamaanka dalkaasi. Wuxuu sheegay in weli qaxootiga Ingiriiska ku soo qul qulayaan, hase ahaate la bilaabay in siligyo la xir xiro. Bishii maarso ee sanadkan ayey labada dowladood isku af garteen dhismaha derbigaasi, waxaa lugu wadaa inuu noqdo badkiisu afar mitir oo dherer. Derbigan ayaa sidoo kale waxaa laga dhisi doonaaa labada dhinac ee Faransiiska iyo Ingiiriiska, qarasha ku baxayana waxaa bixineeysa dowladda Ingiriiska.
Ugu dameyntii derbigan ayaa waxa uu dhameeystir u noqon doonaa silig horey ugu xirnaa magaalada dekeda ah Calais, halkasoo ay qaxootigu dhibaato ku hayeen gaadiidleeyda beeraleeyda ah ee marta wadooyinka, kuwaas oo qaarkood ku qasbi jireen in ay geeyaan xadka Ingiriiska.
Waxaa soo arruurisay;
Kaniisad codsatay in dad Ethiopian ah xoog looga saaro
Asc dhamaan somalaay. Aduunka hada waa kadarooya Malin walibo waxa la Maqla war horleeh.waxan maqalnaay koow yahuuda aa deerbi ka dhiistaay dhulka barkeeysan ee reer falastiin iyo iyaga u dhaxeeyo hadana waxa maqlanaay USA oo waxeey rabta ineey deerbi ka dhisto iyaga iyo magsiiko inta u dhaxeeyso.hadana ma ingriiska iyo faransiiska aa kudarsamaay.Sheekadan waa ka weyn tahaay qaxooti laakiin waxa so socdaa kadaraan ilaahow naga Nabad geli anaga iyo i.tii islaam ah oo dhaan